जाडो बढ्यो ? यसो गर्नुहोस् « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
जाडो बढ्यो ? यसो गर्नुहोस्
८ पुष २०७३, शुक्रबार १२:४८
काठमाडौँ ८ पुस । राजधानीलगायत देशका विभिन्न भागमा चिसो बढेको छ । जाडो मौसम सुरु भएसँगै चिसोका कारण शरीरमा विभिन्न खाले समस्या आउँछन् ।
जाडोका बेला देखिने समस्याहरुमा सामान्य रुघाखोकीदेखि ज्वरोसम्म पर्दछन् ।
कसैलाई चिसोको एलर्जी हुन्छ । साथै अहिलेको समय रुघाखोकीले सताउने बेला पनि हो । मुटुका विरामीले पनि जाडोमा आफूलाई बढी ख्याल गर्नुपर्छ । वालवालिका र वृद्धवृद्धाहरुलाई पनि जाडो मौसम कष्टदायक हुन्छ ।
जाडोयाममा रोगबाट बच्न निम्न कुराको ख्याल गर्नुपर्छ-
कयौं मानिसलाई चिसोका कारण शरीरमा विभिन्न एलर्जी हुने गर्छ । यसले गर्दा शरीरमा दम, रुघाखोकी लगायतको समस्या उत्पन्न हुन्छ । अझ कयौंलाई पहिले नै दम छ भने पनि चिसो बढ्दै गएपछि उक्त झन् बढ्न थाल्छ । त्यसबाट बच्न न्यायो लुगा लगाउनुपर्छ । सकेसम्म आˆनो वरिपरि तातो बनाएर राख्नुपर्छ । मनतातो पानी पिउनुपर्छ । धेरै चिसोमा घरबाट बाहिर ननिस्कनु नै उपर्युक्त हुन्छ ।
त्यस्तै, मुख छोपेर हाछि्उँ गर्नुपर्छ । बालबालिकालाई आवश्यक खोप लगाएर पनि चिसोका कारण हुने समस्याबाट बचाउन सकिन्छ ।
प्रकाशित : ८ पुष २०७३, शुक्रबार १२:४८